इन्डिजिनियस भ्वाईस१० असोज २०७४, मङ्गलवार
दसैँ बहस सृङ्खला –३
हिन्दूशास्त्रले दसैँलाई आफ्नो चाड मान्दा आदिवासी र किरात जातिले यो चाड आफ्नो नभनी यसको अवज्ञा गर्नु वा बहिस्कार गर्नु एक हिसावले ठूलै गलत सोच हुन्छ । हिन्दूहरूले यो संस्कृति ग्रहण गरेको प्रघटना आदिवासी÷किरातहरूको लागि एउटा गर्वको विषय हो । समस्त किरातहरूले आफ्ना पूर्वरीत अनुसार यस कृषि चाडलाई निरन्तरित गर्दै लानुपर्छ । हिन्दूहरूको दसैँचाड मान्ने सद्भावलाई आदिवासीरकिरातहरूले प्रत्यूत्तरमा आदरसाथ लिनुपर्दछ । दसैँको अवज्ञा आदिवासी/किरात संस्कृतिकै अवज्ञा हो ।
कुनै एक बाहुन नेताले यो दसैं भनेको किरातहरूको आफ्नो चाड हो नबुझी दसैँका विरोध गर्दैछन् हिजो आजका आदिवासी÷किरातहरूले भनेर मसँग भन्नुभएको थियो । उहाँले दलील स्वरूप भन्नुभएको थियो दसैँ अनाजसँग सम्बन्धित चाड हो । अनि अनाज भनेको कृषि उत्पादित वस्तु हो । हरप्पा र महेन्जोदडोको उत्खननबाट बुझिएको कुरो हो कि आर्यहरू यता आउनुभन्दा पहिले नै यताका जनजातिहरूले कृषि सुरु गरिसकेका थिए । आदि । म पनि त्यही हिसावले सोच्ने मान्छे परेँ र दसैँ मुखैमा आइपुगेको हुँदा त्यसलाई केही विश्लेषण गरी तपाईं सामू राख्न मनलाग्यो ।
हरप्पा र महेन्जोदडोको उत्खननबाट बुझिएको कुरो हो कि आर्यहरू यता आउनुभन्दा पहिले नै यताका जनजातिहरूले कृषि सुरु गरिसकेका थिए ।
वेदहरूबाट बुझिन्छ आर्यहरू गाई पालुवा जाति थिए र गाई चराउने सिलसिलामा स्थान सर्दै पश्चिम युराली भेगबाट पूर्व भारतीय उपमहादेशतर्फ आएका थिए । उनीहरू निश्चित रूपमा घुमक्कड थिए । एक स्थानमा बस्दैनथे र कृषि यिनीहरूको पेशा त्यसबेला थिएन । यता सिन्धुघाँटी तथा गङ्गाको मैदानमा पसेपछि यताकै जनजातिहरूको सिकोमा स्थायी बसोबास सुरु गर्नलागे र त्यही सिकोमा कृषिपेशामा लागे । यतैको संस्कृति ग्रहन गर्दा उनीहरूले कृषिबाट उत्पादित वस्तु चामल अर्थात अक्षेता निधारमा लाउने विजयादशमी वा दसैँचाड पनि ग्रहण गरे । कुरा त यही हो तर फरक कहाँ पर्न गयो भने आर्यहरूले दसैँलाई धर्मशास्त्रहरूमा उद्धरण गरे र आर्यदेवताहरूको पारलौकिक कथा जोडिदिए । अनि त युगौँ बितेपछि हिन्दूका उनै शास्त्रीय आख्यानहरूका कारणले दसैँ हिन्दूहरूको धार्मिक चाडको रूपमा मात्र बुझिन लाग्यो ।
कसरी यो अनाज सम्बन्धित चाड हो त ? मुख्यतः यो चाडको साइत धान पाकेर घर भित्र्र्याउने बेला पारेर गरिएको छ । कृषि उत्पादित चामललाई अक्षेताको रूपमा निधारभरी टाँसेर त्यो उत्पादनको खुशियाली मनाइन्छ । धान वा मकै वा अन्नहरू खसेर उम्रिन गएका अङ्कुरहरूलाई जमरा भन्दै कानमा सिउरेर आफूलाई सिँगार्दछन् । धान भित्रिएको छ त्यसैको पकवान बनाएर रमाउँछन् । आफू खान्छन् यीनै उपलव्धिहरूका आतिथ्यसाथ नरनाता इष्टमित्रहरूसँग पनि भेट्घाट भलाकुसारी गर्दछन् । अन्न घरमा भित्रिएको छ त्यसलाई बेचेर लुगाफाटो वा अन्य रौसका सामग्रीहरू जोहो गर्दछन् । निश्चित रूपमा यो अनाजको चाड हो भन्न गहकिला प्रमाणहरू छन् ।
यो चाडको साइत धान पाकेर घर भित्र्र्याउने बेला पारेर गरिएको छ । कृषि उत्पादित चामललाई अक्षेताको रूपमा निधारभरी टाँसेर त्यो उत्पादनको खुशियाली मनाइन्छ । धान वा मकै वा अन्नहरू खसेर उम्रिन गएका अङ्कुरहरूलाई जमरा भन्दै कानमा सिउरेर आफूलाई सिँगार्दछन् ।
कुरा त यसोउसो जे भने पनि यो चाड आर्यहरूले पश्चिमबाट ल्याएको नभई यतैको उपज थियो र आर्यहरूले यसलाई पछि ग्रहण गरेको हो भन्नुमा छ । यसका प्रमाणहरू अरू कुराबाट पनि पुष्टि हुन सक्छ । तीमध्ये एउटा यो पनि हो कि यो चाड मनसुनी जलवायु क्षेत्रको उपज हो ।
मनसुनी जलवायु हिमालयदक्षिण सिन्धुघाँटी गङ्गा मैदान र भारतको देक्कन प्लेटोमा हिन्दमहासागरवाट आउने वेष्टर्ली विन्ड (पश्चिमतिरबाट आउने सामुद्रिक वायु) को कारणबाट निर्मित जलवायु हो । यस वायुले हिन्द महासागर बाट वाष्प बोकी जुनजुन क्षेत्रका जलवायुमा प्रभाव पार्दछ । त्यस क्षेत्रलाई मनसुनी क्षेत्र भनिन्छ । सूर्य ट्रपिकअफ केन्सर २३.५ डिग्री अक्षांश मा आउँदा र त्यहाँबाट फर्केर इक्वेटरतिर फर्केर जाँदा तीनचार महीना सूर्यको रापले हावा तातिन जान्छ र त्यस क्षेत्रमा हवाको छाप कम भई हावा माथि उठ्दछ । त्यहाँ हावाको मात्रा कम हुँदा दक्षिण पश्चिमबाट हुर्रिएर हावा पुरिन आउँछ । यसरी आउने हावाले हिन्द महासागरबाट त्यतैका सामुद्रिक बाफ बोकेर आउँछ र यताका पहाडहरूमा ठोक्किएर वर्षा गराउँछ । यो वर्षा अन्दाजी ३ महीनासम्म हुन्छ ।
सूर्य ट्रपिक अफ केन्सरबाट उँधो झर्न लागेपछि वेस्टर्ली विन्डले दिशा नै परिवर्तन गर्ने हुँदा यता वर्षा नै बन्द हुन्छ । अब यस क्षेत्रमा वर्षाबाट हुने बाढी पहिरो असिना आदि इत्यादि कष्टहरूको अन्त्य हुन्छ । तर यसै बेलामा वर्षाको कारणले हुने उत्पादनहरू पाकेर पहेँलपुर भइरहेको हुन्छ । बन जङ्गलमा घाँस फलफूल भएका हुँदा पशुपन्छीहरू पनि मोटाएका हुन्छन् । कृषिकर्मको बाटोमा व्यवधान भएका दुःखकष्टहरू नाश भएको हुन्छ । उनीहरूका परिश्रमहरू पाकेर धनधान्य भएका हुन्छन् । पानी संलिएका हुन्छन् । हीलो सुकिसकेका हुन्छन् । दिन खुल्ला भइसकेको हुन्छ । गर्मी हराइसकेको हुन्छ । त्यो वर्षाको दुख कष्टबाट उनीहरूले विजय प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यही दुखमाथिको विजयको उपलक्षमा उनीहरूले खुसियाली मनाए एउटा चाडको रूपमा । उनै उपलव्धीहरूले आफूलाई सृङ्गार गरेर (अर्थात् धानका चामल निधारमा टाँसेर खसेका दानाका अङ्कुरहरू शीरमा शीउरेर र उत्पादित मासु र चामलले आफू परिवार नातेदार अनि इष्टमित्रलाई सत्कार गरेर, अनि लामो समयको परिश्रम पछि फुर्सद पाइएकोले नातेदार अनि इष्टमित्र भेटघाट गरेर ।
पहिलो कुरा त आर्यहरू घुमक्कड पशुपालक त्यसैले निधारमा टाँस्ने धानचामल उनीहरूको लागि अनजानकै वस्तु थिए । त्यसमाथि उनीहरू जहाँबाट आए त्यहाँ मनसुनी जलवायु नहुँदा धान उब्जाउने प्रविधि पनि थिएन र जुन साइतमा दसैँ हुने गर्दछ त्यो साइत युराली भेगका जनजातिको लागि हुनै सक्दैन । किनभने यो साइत दसैँजस्तो मनसुनी जलबायुबाट प्रदत्त कृषिउत्पादनसँग सम्बन्धित छ । युराली भेकमा मनसुनी जलबायु नभएको हुँदा त्यसमासमा धानको उब्जाऊ हुँदैन र त्यही मितितिथिको साइत त्यहाँ बन्दैन । त्यसैले निर्क्यौल यही बन्दछ कि दसैँ मनसुनी जलबायु क्षेत्रका जनजातिकै चाड थियो र त्यो जनजाति यस क्षेत्रको प्रमुख जातिआदिवासी िकंराँतहरू मात्र हुन सक्दछन् । पछि यता स्थाइ बसोबास गर्न आइपुगेका आर्यहरूले पनि दुखमाथि विजय प्राप्त गरेको यो मितितिथिलाई उही रूपमा आदिवासीरकिरातहरूसँगै मनाए । आफ्ना शास्त्रहरूमा दुखमाथिको विजयलाई अद्यात्मिक रूप दिन असुरहरूमाथिको विजयको रूपमा कथाकृत गरे । एउटा फरकलाई ध्यानाकृष्ट गर्नुहोस् किरातहरू चामल नरङ्गाई सेतो अक्षेताले टिका लगाउँछन् जब कि हिन्दूहरू यसलाई सिन्दुरले रङ्गाउँछन् । सिन्दुर हिन्दूहरूको टिका भएकोले यसलाई रङ्गाइयो भने किरातहरू आफ्ना पूर्व रूपमै अडिग थिए र छन् ।
किरातहरू चामल नरङ्गाई सेतो अक्षेताले टिका लगाउँछन् जब कि हिन्दूहरू यसलाई सिन्दुरले रङ्गाउँछन् । सिन्दुर हिन्दूहरूको टिका भएकोले यसलाई रङ्गाइयो भने किरातहरू आफ्ना पूर्व रूपमै अडिग थिए र छन् ।
दसैँलाई कृषिसँग जोड्ने भनाइबाहेक अरू केही सन्दर्भहरू पनि छन् जसले दसैँ आर्यहरूद्वारा ल्याइएका चाड नभई आदिवासी/किरातहरूकै चाड भएको कुराको पुष्टि गर्दछ । पहिलो कुरा त के भने दर्शै दुर्गापूजासँग सम्बद्ध भएकोले यो मातृसतात्मक समूहको चाड भनेर मान्न पर्ने हुन्छ । हिन्दू जाति आइमाइ जातिलाई सामान्य वस्तुसरह दासी मान्ने र मृतलोग्नैसँगै जीउँदै सति पठाउने पितृसतात्मक जाति भएको हुँदा स्त्रीशक्तिलाई नै सर्वशक्तिमान मान्ने चाडको प्रवर्तक आर्यहरू हुनै सक्दैन ।
पश्चिमबाट आउने आर्यहरू युरालबाट सिन्धु घाँटीसम्म आइपुग्दा उनीहरू इन्द्रपूजक थिए । सिन्धक्षेत्रमा पसेपछि उनीहरू विष्णुपूजक बने । यताका किरातदेव वा द्रविडिएनदेव शिव गणेशलाई आत्मसात गर्न उनीहरूलाई हज्जारौँ वर्ष लाग्यो र गङ्गाको मैदानको उत्तरपूर्वी भेगमा आइपुगेर मातृसतात्मक समूह आदिवासी/किरातहरूसँग उनीहरूको सम्पर्क बन्न अरू हज्जारौँ वर्ष लाग्यो । यसले के जनाउँछ भने हिन्दूहरूले यस चाडलाई आत्मसात गर्न हज्जारौँ वर्ष लाग्यो र शास्त्रहरूमा दसैँको उद्धरण भएको धेरै भएको छैन सम्भवतः केही हज्जार वर्ष मात्र ।
दसैँ हिन्दूहरूको चाड थिए भने त्यो प्रचलन पश्चिमतिर हुनुपर्दथ्यो वा हिन्दूहरूको प्रभुत्व भएका अन्य क्षेत्रहरूमा धुमधामले हुनुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो छैन । दसैं उनीहरूको प्रमुख चाड त्यता छैन । चामलको टीका त त्यता प्रचलनमै छैन भने पनि हुन्छ । बुझ्नु पर्ने यो छ कि दसैँ गङ्गा उत्तर हिमाली भेक र वङ्गालजस्तो आर्यहरूको आगमनको अन्तिम सीमा क्षेत्रमा मात्र धुमधामले प्रमूख चाडको रूपमा मानाइन्छ र यो क्षेत्र पूर्णतः आदिवासी/किरात क्षेत्र हो । यस भेकका हिन्दूहरूले दसैँ माने भन्दैमा हिन्दूहरूकै आयातित चाड मानेर आदिवासी रकिरातहरू पर सर्नू गलत नै हुनेछ । गङ्गापारिका हिन्दूहरूले नेपालीहरूलाई टीका लगाएको देख्दा देखो पहाडीलोग चावल माथामे लगाके फिरता है भनेर मूर्ख बनाउने सन्दर्भ यहाँ विचारणीय छ ।
यो क्षेत्र पूर्णतः आदिवासी/किरात क्षेत्र हो । यस भेकका हिन्दूहरूले दसैँ माने भन्दैमा हिन्दूहरूकै आयातित चाड मानेर आदिवासी रकिरातहरू पर सर्नू गलत नै हुनेछ ।
अर्को सन्दर्भ पनि यहाँ छेडूँ । हिन्दूहरूमा चार वर्ण छन् । उनमा ब्राह्मण र क्षेत्री वर्णहरू मात्र पूर्ववत् आर्यहरू हुन् । अरू थपिएका वैश्य र शुद्र वर्णहरू यता आगमन भएर सम्पर्कमा आएपछिका सम्झौताका जाति एवं विजित जातिहरू हुन् । वैश्यहरू कृषक वा व्यापार गर्ने समुदायका जातिहरू हुन् भनी हिन्दू शास्त्रले नै भन्दछ । आर्यहरू कृषक थिएनन् त्यसैले उनीहरू वैश्य भएनन् ।
वैश्य नभएका ती आर्यहरूका यो दसैँ भन्ने कृषकहरूका चाड आफ्ना कसरी हुन्छन् ? हिन्दूहरूका चाड त तब बने जब यताका आदिवासी/किरात र उताका आर्यजाति मिसिन लागे वा जबदेखि आर्यहरूले किरातहरूका संस्कृतिसमेत ग्रहण गरी यस भेगमा सहभागी बन्न थाले । बिचारनीय यो छ कि हिंदूसंस्कृतिको बिकास नै आर्य र किरांत लगायतका अन्य यस भेगका आदिवासी जनजातिहरूका संस्कृतिहरूको संमिश्रणबाट भयो ।
कुरा यीनै हुन् । हिन्दूशास्त्रले दसैँलाई आफ्नो चाड मान्दा आदिवासी रकिरात जातिले यो चाड आफ्नो नभनी यसको अवज्ञा गर्नु वा बहिस्कार गर्नु एक हिसावले ठूलै गलत सोच हुन्छ । हिन्दूहरूले यो संस्कृति ग्रहण गरेको प्रघटना आदिवासी/किरातहरूको लागि एउटा गर्वको विषय हो । समस्त किरातहरूले आफ्ना पूर्व्रित अनुसार यस कृषि चाडलाई निरन्तरित गर्दै लानुपर्छ ।
हिन्दूहरूको दसैँचाड मान्ने सद्भावलाई आदिवासीरकिरातहरूले प्रत्यूत्तरमा आदरसाथ लिनुपर्दछ । दसैँको अवज्ञा आदिवासीरकिरात संस्कृतिकै अवज्ञा हो । इति ।
source: kavitaram.shrestha Facebook wall.